Nin hooyadiis ku dilay Kakamega, kadib markii uu dhex maray muran – The Voice of Northeastern Kenya
Nin hooyadiis ku dilay Kakamega, kadib markii uu dhex maray muran
Qoys ku dhaqan xaafad lagu magacaabo Emukowa oo ka tirsan degmada Butere ee maamul goboleedka Kakamega ayaa waxaa usoo hoyatay murugo, kadib markii shalay galinkii dmabe uu wiil ka tirsan qoyskaasi dil u geystay hooyadiis.
Wiilkaasi ayaa lagu soo waramay in xiligaas uu isku dayayay in uu kala dhex galo muran u dhexeeyay hooyadiis iyo aabihiis, si uu uga hor tago in ay isku gacan qaadaan.
Qof goob jooge ah oo lagu magacaabo Benson Odongo ayaa sheegay in markii uu ku guul dareystay dhexdhexaadintooda uu carooday isla markaana uu si awood leh kursi alwaax ah ugu garaacay hooyadiis oo isla goobta ku geeriyootay.
Qaar ka mid ah dadka dariska la ah qoyskaas ayaa soo tabiyay in aabaha qudhiisa ay waxyeello kasoo gaartay falka uu ku kacay wiilkiisa.
Mr Gerald Odongo oo ah aabaha qoyskaan ayaa warbaahinta u sheegay in muranka isaga iyo xaaskiisa uu ka bilowday markii uu gurigiisa tagay isagoo shaqada ku daalay, kadib markii uu xaaskiisa ka codsaday in ay raashin u karisana ay u sheegtay in ay gabadhooda u direyso cunta karinta, taasna uu ku qanci waayay isaga.
Taliyaha ciidamada booliska ee degmada Butere Josephine Mbane ayaa sheegay in ay baaritaanno ku hayaan dhacdadaan.
Falalka la xiriira murannada qoysaska oo intooda badan uu dhiig ku daato ayaa mudooyinkaan si aad ah ugu soo badanayay dalka.
6-dii bilood ee ugu horeysay ee sanadkaan 2016-ka ayaa la diiwaan galiyay in ka badan 4,000 oo dhacdo oo dhamaantood ahaa qalalaase dhinaca qoysaska ah oo ka dhacay qeybo kala duwan oo ka tirsan dalka.
← Ciidamada Ciraaq oo la wareegay magaalo Muhiim ah oo u dhow Mosul
Dad mudaharaadeyaal ah oo dilay wasiir ka tirsan xukuumadda Bolivia →
1 thought on “Nin hooyadiis ku dilay Kakamega, kadib markii uu dhex maray muran”
your writing. Cheers! http://bing.org